Nhau - Chishandiso simbi simbi - yakakwira kupfeka kuramba, hupenyu hurefu uye kudhura kuita
Chishandiso chesimbi blade - yakakwira kupfeka kuramba, hupenyu hurefu uye kudhura kuita
Chishandiso simbi ndiyo simbi yekushandisa inoshandiswa kugadzira maturusi ekucheka, ekuyera maturusi, kuumbwa uye kusapfeka-isingagadzirise maturusi.Tool simbi ine yakasimba kuomarara uye inogona kuchengeta kuomarara kwakanyanya pakakwirira tembiricha, pamwe nehurefu hwekupfeka kuramba uye kusimba kwakakodzera.Tool simbi inowanzo rakakamurwa kabhoni chishandiso simbi, chiwanikwa chiwanikwa simbi uye yekumhanya chishandiso simbi.
Simbi inoshandiswa pakugadzira maturusi akasiyana-siyana, kutonhora uye kupisa kupisa kunofa, maturusi ekuyera uye mamwe maturusi anonzi chishandiso simbi.Mhando dzese dzesimbi simbi dzine zvakajairika zvinodiwa, senge kuomarara kwakanyanya, kwakanaka kupfeka kuramba, kumwe kusimba nesimba, uye zvavo zvakasarudzika zvinodiwa, senge kutsvuka kuomarara, kukanganisa kusagadzikana, kudzikama kwekudziya, kupisa kuneta uye zvakanaka zvemuchina zvivakwa.Kuti uwane izvi zvakasiyana zvinodiwa, chishandiso simbi ine nziyo dzakasiyana dzinoshandiswa mukugadzira, uye chaiyo kupisa kurapwa maitiro kunoitwa.
TAA yakagadzirawo idzva reza rakagadzirwa nesimbi simbi. Kuburikidza nekucheka, kugaya mvura uye mamwe maitiro, mashizha ane akawanda ekupfeka kusagadzikana uye kusagadzikana kusagadzikana.
Chishandiso simbi mashizha anoshandiswa mune tambo yesimbi, zvishandiso zvehardware, simbi simbi, michina yekuvaka, simbi, giya, chitubu nemamwe maindasitiri
Ndezvipi zvakanakira chishandiso simbi chipande?
Iko kuita kwemutengo kwe mudziyo simbi chipande yakakwira: mutengo wakakwirira kupfuura wakajairwa chipande, uye hupenyu hwebasa ndekeya dzakajairika reza. Panguva imwecheteyo, deredza kuwanda kwepfuti yekukanganisa michina yekugadzirisa, kudzikisa kusimba kwebasa revashandi. Iko kusakara kuramba kweduturusi simbi mashizha yakanyanya kukwirira kupfuura iya yakajairika yakakwirira chromium mashizha pamusika!
Chishandiso simbi chipande irwo rudzi rwekupfeka-kusagadzikana zvinhu zvine kugona kuita. Iyo ine yakanyanya kukwirira kusakara kuramba kupfuura chiwanikwa simbi, uye ine kuomarara kwakanaka, simba uye yakanaka yepamusoro tembiricha uye ngura kuramba. Hupenyu hwebasa rechishandiso simbi iri pedyo kwazvo nehunhu hwekurapa kupisa. Iyo yekupisa kurapwa kwesimbi simbi inoratidzirwa ne spheroidal annealing kuitira kuti uwane yunifomu uye zvine mwero spheroidal chimiro, Iyo yekupedzisira kupisa kurapwa kudzima uye yakadzika tembiricha tempering (yakakwira spidhi simbi inodzimwa uye kutsamwiswa pa560 ℃ katatu), kuti tora yakasimba kuomarara chimiro neunifomu yakanaka carbides yakagoverwa pane yakatsiga martensite matrix uye simbisa iyo yekupfeka kuramba kwechishandiso simbi. Kupisa kurapwa kweanopisa ekugadzira kufa simbi kwakasiyana. Iyo pre-kupisa kurapwa ndeimwe-nhanho annealing, uye yekupedzisira kupisa kurapwa kuri kudzima pamwe nepakati tembiricha tempering kana yakanyanya tembiricha tempering kuti uwane yakanaka yakazara michina zvivakwa.
Ndechipi musiyano pakati turusi simbi reza uye zvakajairika reza?
TAA Akapfura nenyunje muchina chishandiso simbi chipande ine yakatsetseka uye yakajeka kuoneka, mashoma maburi ejecha, hupenyu hwakareba hwebasa uye yakanaka kupfeka kuramba. Yakadzika chromium castings ine zvakakomba zvakakomba kurema, senge porosity, jecha kunamatira, jecha kubatanidzwa, jecha gomba, jecha kuwedzera, kutonhora kuvhara, kukwana kudira, shrinkage porosity, shrinkage mhango, kushaya nyama, sarcoma, nezvimwe.
Ndezvipi zvakanaka zvekushandisa chishandiso simbi mashizha?
Kazhinji chishandiso simbi yesimbi ine yakareba sevhisi yehupenyu, saka inounza yakaderera kutsiva frequency.Second, nekuda kwehupenyu hwakareba hwebasa uye kusakara kupfeka kwechishandiso simbi simbi chipande, zvinobudirira kudzikisira mamiriro apo iyo bara yekupfura muchina yakavharwa kuti igadziriswe, uye kudzikisira mutengo wevashandi.
Kugadzira vhidhiyo yechishandiso simbi yesimbi:
Kunze kwechishandiso simbi yesimbi, banga reimwewo zvinhu rivepo,Zvemukati meCr-12%, 20%, 25% kana sekukumbira.
Uye zvimwe zvikamu zve pfuti blast muchina inogona kupihwa, senge:mavhiri mavhiri, impeller, impeller kesi, impeller vanes, impeller musoro, guard plate, lining mahwendefa zvichingoenda zvakadaro.
Yakachena uye yakashambadzira yekugadzira musangano weakakwira kuita Pfura nenyunje muchina uye kupembedza zvikamu